Inka Badan 35 Askari Oo Khaliif Xiftar Looga Dilay Bangaazi. – Calamada.com
Inka Badan 35 Askari Oo Khaliif Xiftar Looga Dilay Bangaazi.
calamada August 16, 2016 2 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Bangaazi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Liibiya waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ay ka dhaceen dagaala culus oo u dhaxeeya Ciidamada Majlisu Shuuraa ee magaalada Bangaazi iyo maleeshiyaatka Khaliif Xiftar.
Golaha Shuurada ee Kacdoon wadayaasha magaalada Banghazi ayaa sheegay in 38 Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Khaliifa Xaftar inay ku dhinteen iska hor imaadyo maalintii Isniintii ee shalay ka dhacay magaaladaasi.
Kacdoon wadayaasha magaalada Banghazi waxay sidoo kale sheegeen inay gacanta ku dhigeen hub iyo Saanad Meliteri oo Dowladda Masar ay siisay Ciidamada Khaliifa Xaftar.
Dagaalladii ugu adkaa waxay shalay k dhacay Mandiqadda lagu magacaabo Al-Qawaarshah ee galbeedka kaga beegan magaalada Banghazi ee bariga Dalka Liibiya.
Iska hor imaayadu waxay qarxeen kadib markii Ciidamada Khaliifa Xaftar oo helaya taageero xagga cirka ah ay isku dayeen inay kusoo taqadumaan fariisimaha ay ku sugan yihiin Ciidamada Mujaahidiinta, laakiin Miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa hakad geliyay weerarkii ay soo qaadeen.
Mid ka mid ah Taangiyada ay wateen Ciidamada Xafar ayaa ku waxyeeloobay Miino dhulka lagu aasay, halka sidoo kalena dhowr tiro Askar ahna oo uu ku jiro Sarkaal dagaal geliye ah ay ku dhinteen qaraxyadaasi.
Ciidamada uu hogaaminayo Jeneraalka Shareeco la dirirka ah ee Khaliifa Xaftar ayaa ku dhawaad muddo laba Sanadood ah waxay isku dayayaan inay si buuxda ula wareegaan magaalada Banghazi, halkaas oo ay ka taliyaan Xoogag Islaamiyiin ah oo doonaya in magaaladaas ay ku maamulaan Shareecada Islaamka.
Dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee Khaliifa Xafar iyo diyaarado dagaal oo ay leedahay Dowladda Faransiiska ayaa sii wada duqeymaha wuxuushimada ah ee ay ka geysanayaan magaalada Banghazi.
Duqeyntii ugu dambeysay oo dhacday maalintii shalay ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan Shan ruux oo rayid ah oo aan waxba galabsan, halka sidoo kale duqeyn dhacday maalintii Jimcihii aan soo dhaafnay lagu dilay dhowr ruux oo ay ku jiraan dumar iyo Caruur, iyo Shaqaale Suudaaniyiin ah oo ku sugnaa magaaladaasi.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 13-11-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 14-11-1437 Hijri.